Logitech na-enye ọhụụ ikuku ọhụụ G502 Lightspeed | Akụkọ akụrụngwa
Jordi Gimenez | | Ngwa agha
Na obodo mara mma nke Berlin, ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara ya ọhụrụ Logitech G502 Lightspeed wireless mouse. Nke a Logitech bụ otu n'ime ụdị ndị nwere nnukwu mkpa n’etiti ndị ọrụ na-achọ igwu egwu ma ọ zuru oke maka ndị na-arụ ọrụ ọkachamara ma ọ bụ naanị maka oge ezumike. Ihe ọtụtụ n'ime ndị egwuregwu a na-arịọ maka ụlọ ọrụ ahụ ogologo oge bụ na ọ na-aga ikuku na ụnyaahụ bụ kpọmkwem ihe mere.
Na mgbakwunye Ihe ngosi ohuru a bu Logitech G502 Lightspeed nke egosiputara na ntughari site na ala na mbido gram asaa. eme ka o kwe omume ijikọta nkenke na arụmọrụ nke teknụzụ ikuku na-arụ ọrụ nke ọma na njiri mara oke mma na arụmọrụ dị elu n'ụzọ ọ bụla.
1 Emere ihe ngosi ahụ na Riot Games Studios na Berlin
Emere ihe ngosi ahụ na Riot Games Studios na Berlin
Nke a bụrịrị ihe ngosipụta doro anya nke ebumnuche na akụkụ nke Logitech nke gosipụtara na ọ dị 100% itinye aka na egwuregwu na mkpokọta ya na eSports. Ihe omume ahụ n'onwe ya bụ Carlos «Ocelote» Rodriguez, onye nchoputa na onye isi nke G2. Ọzọkwa nwere Onye isi oche na onye isi oche nke Logitech Gaming, Ujesh Desai, kwuru, sị:
Obi abụọ adịghị ya, ọ nweghị oke dị mma na-egosipụta mmekọrịta zuru ụwa ọnụ anyị nwere na ndị na-egwu egwuregwu na ndị egwuregwu nwere otu ha karịa G502 anyị. . Taa, anyị na-ewetara ihe ha rịọrọ anyị, na ndị ọzọ.
Nhazi ohuru na LIGHTSPEED na teknụzụ POWERPLAY na-eme ka igwe ikuku ọhụụ a kapịrị ọnụ maka egwuregwu Logitech G PRO na ụdị egwuregwu niile. O doro anya na-agbakwunye ihe mmetụta dị elu HERO 16K sensor emana ikpeazụ. Nke a bụ kọntaktị mbụ na ụdị Logitech ọhụrụ ahụ, anyị na-atụ anya inyocha ngwaahịa ahụ n'oge na-adịghị anya na echiche mbụ anyị na nkọwa ndị ọzọ.
Naanị ụnyaahụ mgbe e gosipụtara ọkwa ya ọnụahịa na nnweta ya na ahịa. Logitech emeghị nke ọma na Logitech G502 wireless mouse mouse a na-atụ anya na ị ga-dị na ụkpụrụ na LogitechG.com na n’ụlọ ahịa na-adịkarị na gburugburu ụwa n’otu ọnwa Mee. Banyere ọnụahịa nke ngwaahịa ahụ, anyị ga-ekwu maka ụfọdụ ọnụahịa 149 euro, a pụtara gbanwee price maka òké na atụmatụ ndị a.
N'aka nke ọzọ, ọ dị mkpa iburu n'obi na ugbu a anyị nwere ike ịchọta gara aga nlereanya na USB na-echekwa dị ka Amazonnwere mbelata na-adọrọ mmasị na ọnụahịa ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Ngwa agha » Logitech na-ewebata igwe ojii G502 Lightspeed wireless